बजारमा नेपालीका ज्योति 'सन्दुक रुइत'
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, ११ असोज
बरिष्ठ आँखा सर्जन डा. सन्दुक रूइतको जीवनी सन्दुक रूइत सार्वजनिक गरिएको छ । काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित एक होटलमा शनिबार आयोजित विशेष समारोहमा २१ वर्षसम्म पूर्ण दृष्टिविहीन भएर डा. रुइतले गरेको शल्यक्रियाबाट दृष्टि पाएका सल्यानका शिक्षक तोपबहादुर शर्माले पुस्तक लोकार्पण गरे ।
अस्ट्रेलियन पत्रकार अली ग्रिपरले लेखेको उक्त किताब लेखक संग्रौलाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा शर्माले आफूले २१ वर्षको उमेरसम्म पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन भएर जीवनयापन गर्नुपरेको र यसबीचमा डा. रुइतले आफूलाई नयाँ जीवन दिएको बताए ।
तिलगंगा अस्पतालकी सिइओ रिता गुरुङले आफूले डा. रुइतसँग तिलगंगा अस्पतालमा सुरुवाती चरणबाटै काम गरेको बताइन् । सुरुवाती चरणमा डा. रुइतले आफूलाई सहकार्य गर्न आग्रह गर्दा आफू उनको प्रतिबद्धता र काम देखेर तयार भएको उनको भनाइ छ ।
कर्मशील काममा प्रतिबद्ध रुइतका कारण आफू सधैं उनको काममा जोडिएको उनले बताइन् । कामको सिलसिलामा जहिल्यै पनि डा. रुइतबाट आफूले प्रेरणा एवम् उत्साह पाएको उनको भनाइ छ ।
डा. रुइतले आफूलाई काम मात्रै नदिएको उनले सामाजिक एवम् परोपकारी काममा लाग्न पनि प्रेरित गरेको उनले बताइन् ।
डा. रुइत नेपालको सांस्कृतिक वीर रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, “सन्दुक रूइतको जीवन जिज्ञासा र अन्वेषण, सङ्घर्ष र सङ्कल्प, साहस र सेवाभाव, करूणा र परोपकार तथा त्याग र समर्पणले ओतप्रोत एवम् सादा जीवन, उच्च विचारको आदर्शले शोभित सानदार जीवन हो । रूइतको नागबेली जीवनयात्रा बहुआयामिक विशिष्टतायुक्त, प्रेरणादायी एवम् अनुकरणीय छ । यस्ता उत्कृष्ट मानिसको भव्य जीवन कथा अनुवाद गर्दाका क्षण मेरो जीवनका सुखद र सार्थक क्षणहरु हुन् ।”
डा. रुइतले भने, “अङ्ग्रेजीमा लेखिएको मेरो जीवनीको नेपाली अनुवाद आएकोमा म एकदम हर्षित भएको छु । मेरो पुस्तकले कसैलाई परोपकार वा सत्कर्मको बाटोमा लाग्न प्रेरित ग¥यो भने मेरो जीवनी सार्थक भयो भन्ने म ठान्नेछु ।”
फाइनप्रिन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीरज भारीले भने, “विनयशीलता र परोकारका प्रतीक डा. रूइतको जीवनी प्रकाशन गर्न पाउनु हाम्रा लागि ठूलो सौभाग्य हो । यो हामीले उनलाई गर्न सक्ने सम्मान पनि हो । मलाई लाग्छ, जोन उडको माइक्रोसफ्टदेखि बाहुँनडाँडासम्मले जस्तै यो पुस्तकले पनि वैभव र विलासको जीवन त्यागेर संसारलाई असल बनाउने उदात्त कर्ममा लाग्न हामीलाई प्रेरित गर्छ ।”
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ११, २०७६, ०६:३५:००